MAXAMUUD XAASHI: Soddan Jirkii Ugu Saameynta Badnaa Siyaasadda Somaliland!
Badi inta aanu isku jiilka nahay, Xaashi waxay ku barteen uun isagoo biyo culusta ka ciidaminaaya. Labbaateenyo sanno ka hor wuxuu ahaa xildhibaan sheegan, oo ay kelmaddiisu damaqdo madaxweyne Cigaal. Wuxuu ahaa mucaarid mitidid ah, oo sahansaday halkuu ka dagaal galaayo; codkar balaaqiya oo aan eray na u gaban.
Xaashi wuxuu ahaa wiil fiiro dheer oo ay 20 sanno ka hore u muuqatay wax aynu maanta ka hadlayno. Wuxuu sir iyo caad ba u sheegay, sida Cigaal dawladnimadii umaddu wada lahayd ugu tolaayo shaadh beelleed. Waagaas Xaashi wuxuu qoray mid ka mid maqaaladii ugu saamaynta badnaa sooyaalka siyaasadeed ee SL. Waa maqaalkii dheeraa ee uu wargeyska Jamhuuriya daabacay oo uu ciwaankiisu ahaa: ‘Awrku dhinac buu ka raranyahay, innuu dheelliyo na wuu u dhow yahay!’
Qalinka Xaashi wuxuu suureeyay sida dawladnimadii curdinka ahayd uu Cigaal seeska uga gelinaayo qalooc qabiilaysan. Qormadaasi waxay umadda tooshka ugu qabatay sida Cigaal dawladnimadii ugu looggay beeshiisa; waxay sidii dharaar u iftiimisay sida maamulkii iyo manfacii ba loogu soo uruuriyay in Suldaan wada xukumo. Tooshkaasi wuxuu jiif iyo joog ba u diidday Cigaal iyo raggiisii. Muddo billo ah ayey socotay jawaab dhinaca keliya ka imanaysa oo maqaalki shirabna lagaga hal-celinaayo; haddana qof keliya wuu beenin kariwaayay bartuu Xaashi bidhaanshay! Raggii is tolnimo xilqaamay waxaa ka mid ahaa suxufi Wayab.
( FG: 2010kii baan oggaaday innuu ahaa wiil aan bartilmaameedka la seegin, oo aad looga damqaday runtiisa. Sababta oo ah, inaad xasuusataan iyo in kale mooyee markii wasiirka loo magacaabay, markii 1aad ee uu saxaafadda la hadlaa waxay ahayd, maalintii la furaayay barnaamijkii la hirgaliyay wakhtigii wasiir Geeljire ee ‘Maqal Dadkaaga’. Waxaa furintaankiisa lagu soo casuumay tobbanneeyo wasiir oo uu wasiir Gaboose hoggaaminaayay, Xaashi na ka mid ahaa. Maalintaas qof baa Xaashi su’aallay: hadda ma ku qanac santahay sida wax loo qaybiyay, wa adigii xukumaddahii hore [tii Cigaal uun buu u jeeday] salluugsanaayee? Dabadeed waxaan maalintaa is weydiiyay: who is Xaashi? kaddib ayaan baadhay xogtiisa.)
Maxamuud Xaashi wuxuu tiir dhexaad u ahaa mooshinkii maamuus ka xayuubinta ahaa ee madaxweyne Cigaal lagu soo gole joojiyay. Aftahamadiisii aan surmo seegtada aqoon iyo dhiiranaantiisa siyaasadeed awgeed, waxaa loo aqoonsaday ‘Hoggaamiyahii Aqbaliyada Mucaaridka’. Mooshinka xilka xayuubinta waxaa golaha ka hor akhriyay Xildhibaan Maxamuud Xaashi Cabdi. Markii codka loo qaaday, Cigaal wuxuu ku badbaaday hal cod oo la sheegay innuu Xildhibaan Cali Barre oo Warsangaliya ahaa. Cigaal wuu ku aamanaa aqbalaadda in la soo gole joojiyo, maxuu se ka dambaysiiyay?
Cigaal iyo gurigii mus-dambeedka u ahaa waxay weerar ku qaadeen Xildhibaannadi mooshinka waday. Waxaa xabbad lagu riday Xildh. Maxamed Muuse Diiriye oo hadda ah Wasiirka Biyaha (2020…) Waxaa amnigiisu halis galay Maxamud Xaashi oo deganaa gurigii uu Xildhibaan Tuke Xero-awr ku lahaa, waxuu u soo guuray xaafadda Aktoobar – Sinimo Aktoobar.
AHN Madaxweyne Cigaal wuxuu qaaday tallaabo cadaawadi ku dheehantahay, wuxuu faq iyo fagaare ba ka sheegay in Maxamuud Xaashi ka tirsan yahay ururada argagixsada, sidoo kale na yahay Cusaama Binu Laadinka bariga Afrika! Eeddaa ka baxsan tii siyaasadda, Xaashi wuxuu kaga hal-celiayay qormo caan noqotay; waa markii uu lahaa: hadda annigu ma sheegin madaxweyne, sababta xajka laguugu diidey! wuxuu Cigaal u dacaldhabaayay xan maalmahaas suuqa taallay, oo laga soo xigtay jariirada Al-Qudz Al-Arab ee fadhigeedu yahay London; xogtu waxay ku saabsanayd in madaxweyne Cigaal loo diidday xajka, xidhiidh uu la sameeyay Isaraa’iil awgeed!Malaha maanta Khaliijiyiintu weyba innoogu sed burin lahaayeen xidhiidh lala yeesho walaalaheena cusub ee Isaraa’iil!
Ugu dambeyn, eedda qaban weyday madaxweyne Cigaal oo gacmaha dhiig ku lahaa, musuqmaasaqii maamul ee ugu weynaa sameeyay, Somaliland ku soo koobay Berbera – Wajaale Corridor; iyo Muuse Biixi oo 90kii illaa maanta dhulka umadda boobayay, una samaystay maleeshiyo beeleedyo, sidoo kale balan ka baxa caadayste ku noqday, ma qabanayso Maxamuud Xaashi oo lagu eedeeyo waxoogaa shilimo ah – gar waa loo wada islaam. Runtu se waxay tahay, Cigaal iyo Biixi tol bay yeesheen, ee Xaashi tol ma yeellan doonaa? U maleyn maayo, waase loo wada joogi ba.
– Anaa quusan waayaye, bahdiis qoonsan mahayaane
Maxamed Cabdalle Xasan